demokrasia | GAZETY_ADALADALA
« 05 mars 2009 » – Film tena izy
Posted on 05/03/2009 by gazetyavylavitra
Tsy film akory no hotantaraiko anao fa ny tena niainana. Ary tsy tany Texas na Liban, na Irak fa teo Antananarivo Renivohitra.
Toy ny omaly dia efa tomefy mpitandro filaminana nialohan’ny nahatongavan’ireo mpanao fihetsiketsehana ny tanàna. Ary dia tena tanteraka tokoa ilay antso avo nataon’i Andry Rajoelina fahiny hoe hatao « tanàna maty Antananarivo » – saingy ny fotoana no tsy nifanojo – satria tamin’ity indray mitoraka ity dia ny EMMO/NAT no nanao ‘fitokonana’ teo amin’ny kianjan’ny 13 mai ary nameno ny elakelan-trano rehetra sy ny vodi-rindrina, hatrany Ambodifilao sy Soarano, Behoririka, Analakely, Ambohijatovo, Ambanidia, Ankadifotsy.
Nivoaka indray aho androany ho anareo mpamaky, niakatra ny tetezan’ny Behoririka. Feno olona teo ambony teo.
Nisy ireny fiaraben’ny mpitandro filaminana ireny koa tonga nankeo aorian’ireo mpitangorongorona.
Rehefa elaela teo ny roa tonta, dia niteny ireo mpitandro filaminana fa tokony hiparitaka daholo ny olona ka tsy hisy hijorojoro sy hitangorongorona intsony. Tsy nahoan’ireo olona teo ambony tetezana izany rehetra izany. Hany herin’ireto mpitandro filaminana dia sady namelona ny fiara no nandatsaka baomba mandatsa-dranomaso ary dia nirifatra nandao ny toerana. Tsy niverina teo intsony izy ireo raha tsy fotoana ela taty aoriana, fa lasa kosa nidina namonjy ny tery ambany akaikin’ny toby fitsinjarana solika Galana ampitan’ny Pain Français.
Tsinjo ery ambany ery manakaiky ny ranomaimbo Behoririka hatrany kosa ireo namany mandeha an-tongotra sy manao sakana.
Rehefa lasa ny herin’ny entona nandatsa-dranomaso, dia niverina nitangorongorona indray ny olona. Nanoloana indrindra ny toeram-pivarotana Luxor ka hatraty amin’ny tohotohobato sy iny ambany tetezana iny. Nofenoin’ireo olona nitangorona ireo vato ny arabe nanoloana ny Luxor…
Minitra vitsy aho no teo dia lasa indray namonjy ireo namana mpaka sary sy mpanao gazety tany Ambohijatovo. Efa somary antoandro ihany ny andro, ka dia niara-namonjy toeram-pisakafoanana teo ampototry ny tohotohobato Tavao. Iray metatra eo amin’io toerana io kosa no misy ny sakana ataon’ny mpitandro filaminana…
Rehefa avy nisakafo indray dia lasa nidina nmakivaky ny lalam-be migodanan’Analakely sy ny kianjan’ny 13 mai izahay rehetra.
Niato kely izahay rehefa teo ampitan’ny Hotel Select, haka aloka sy hamory aina vao. Nandritra ny fidinanay ho eny amin’ny kianjan’ny 13 mai no nahitanay ireo mpitandro filaminana isaky ny sampanan-dàlana sy elakelantrano. Tena tanàna maty tokoa Antananarivo androany ary ny mpitandro filaminana no nanohy ny hetsiky ny 13 mai. (sic). Ao ireo mitsotsotra maka aina, na matory ampitoerana mihitsy aza, ao ireo mahita fahafinaretana ‘manala azy’ amin’ireo mpandalo mba sendra azy, ka ampihazakazahana ny olona, dia avy eo indray asaina mandeha mora, ary dia ampifandimbiasina tahaka izay (sady arahana fihomehezana). Toy ny nahazo ilay boaikely tetsy amin’ny Firaisana voalohany no lalina. Nitaingina bisikilety i zandrikely. Handeha ho any Behoririka na Ambondrona any angamba no anton-dia. Avy any Ambodifilao izy no nipoitra. Rehefa tonga teo amin’ny fivoahan-dàlana teo amin’ny firaisana voalohany, dia nasaina niverina tany amin’ny 20 metatra aloha, ary dia nantsoina indray hiverina hanohy ny làlany, ary rehefa nahazo ny làla-mahitsy hihazo ny Econo Center iny dia nokorododosina sy nihogahogan’ireto mpitandro filaminana.
Rehefa nandalo kosa izahay teo amin’ny Econo Center ka nitodika miakatra amin’iny làlana miakatra ho any Ambondrona iny, dia nahita miaramila marobe miankin-drindrina sy makamaka aina tamin’ny ilany havian-dàlana. Nisy taminay no naka sary izany zavatra izany, ary dia nahazo vava be avy amin’ny iray tamin’izy ireo, nanao hoe:
Eh; inona no hakahakanao sary eo, Tsy mila maka sary, raha vao misy sakoroka eo dia ianao no pehako voalohany.
Saingy nisy tamin’ireto namany kosa no nahatsikaritra ny sasany taminay hoe nanao akanjo misy soratra PRESSE sy niambozona badge ka nampangiana hainga ity namany, no sady niteny hoe
avelao leroa ny olona hanao ny asany a! Mpanao gazety ireny, ka tsy azon’ialahy atao inona rehefa mitondra ny badge-ny
Zavatra iray nahazendana sy nahatsikaiky anay rehetra koa anefa ity iray ity: feno kapaoty an-jatony efa nampiasaina teo amin’ny faritra nisy ny sakana nataon’ireo miaramila nanoloana ny tsenaben’ny Pochard. Maro be ireo mpitandro filaminana teo, na ny mandeha an-tongotra, na ny tao anaty kamiao…
Tafaverina teo Behoririka ambany amin’izay izahay rehetra tokony ho tamin’ny 2 ora mahery tany ho any. Ireo olona marobe dia avy ery ambony tetezana sy manoloana ny Luxor ary iny ambanin’ny tobin-tsolika Galana iny.
Ireo ‘miaramila’ kosa dia mipetrapetraka toa tsy te-hahalala ery akaikin’ny Toyota Rasseta ery.
Tsy tapitapitr’izay dia indreny fiara tsy mataho-dàlana (4 X 4) roa nisosososo nidina an’i Behoririka nanitsy ho any amin’ireto olona nivorivory ka tsy nisy alaharo alaharo, fa tonga dia sady mandefa grenade lacrymogène sy manao tifi-danitra.
Izay angamba no efa nandrasan’iretsy ‘miaramila’ tsy nihetsika tery akaikin’ny Toyota. Rehefa mandeha moa ny tifitra sy ny grenady, dia milefa ny olona, ary rehefa dila indray izany dia miverina izy ireo. Nahatezitra ny olona ny zavatra nitranga, ka nahatonga azy ireo hanangona vato tao ambony tetezana, nataony tamin’ny sisiny. Vantany vao nandalo sy nitifitra grenady indray ireto fiara (izay lasa telo, ary hafa fa tsy ny teo aloha intsony), dia nandrasan’ireo olona teo ambony tetezana ny handalovany teo ambany, ary dia notontany vato avy any ambony any. Voatery nialoka tao ambany tetezana araka izany ireo fiara nitondra ireto mpitandro filaminana, ka nidina ny sasany mba hanipy grenady lacrymogène tany ambony tetezana ho fisavana ny làlan-kandosirana. Dia nifanao fangalam-piery teo foana ny roa tonta…
Rehefa tokony ho tamin’ny efatra ora hariva tany ho any, raha noheverina fa nilamina sy tsy nisy nitangorona intsony ny tety amin’ny manodidina an’i Behoririka sy ny tetezana , ary iny làlana mitondra ho any an-tsenan’Andravoahangy iny, dia nisosososo avy any indray ireto fiara 4 X 4, ka na dia efa tsy nisy intsony aza ny olona nivorivory sy nitangorongorona, dia mbola napaoka ihany ny grenade lacrymogène tamin’iny faritry ny tohotohobato sy ny tetezana iny. Mbola natahorany ihany angamba ny hisian’ny tora-bato. Aza mahavoa kosa aloha ny goavy manta e! Nefa anie ka efa tsy nisy na inona na inona e. Sa kosa mbola nangidihidy ny tànana? Na efa zatra nitsotra?
Ary aza mba tratran’ilay fisamborana noho ny lokon’akanjo koa an! Rehefa ry zalahy no mifaniraka, mandritry ny fisamborana, aorian’ny fanipazana grenade, ka manao hoe:
Ilay manao akanjo mena iny (na izay voatonona eo)
dia miomàna izay miakanjo mena ao, na tsy nanao aza, fa nitazantazana fotsiny, rehefa nahazo baiko izay ilay nirahana dia ‘sônegaly’. Mandeha ny daroka tsy misy fijerena ny maha-olona, tsy mahazo miteny na mifandahatra, fa rehefa mena dia mena. Satria tena misy tokoa ny hoe ‘ny kary no nanao ny nataony ka ilay saka nitazantazana no voatapa-drambo”.
Tsy sahy nalaina moa ny sarin’ny daroka sy ny ompa, noho ny fitaovana tsy zarizary,nefa kosa azonareo atao ny mijery izany amin’ny sarin’ireo fahitalavitra manana tranonkalan-tserasera.
Vehivavy iray no maty androany. Nisy ihany koa ny naratra, saingy tsy mbola fantatra ny isa farany, raha ny androany 05 martsa no resahana. Tontolo iray hafa mihitsy izao no iainana eto Antananarivo Renivohitra, satria sarotra be ny fivezivezena hanangonam-baovao.
Niantso diabe amin’ny Sabotsy kosa tao amin’ny fampielezam-peo tsy miankina iray eto Antananarivo i Andry Rajoelina izao hariva izao, tsy voafaritra ny toerana haleha.
Fa ity sary farany omeko anao ity kosa dia olona nandalo tamin’ny moto teo Behoririka, tsy nanao casque ranamana fa nahantony teo amin’ny guidon ilay izy. Ireo fiara 4 X4 anefa aoriany efa mirimorimo miakatra ho any ambany tetezana sady mitifitra grenady lacrymogène ihany, ary nisy tifitra hafa koa (tsy fantatra hoe tena nisy bala hafahafa raha tsy efa ny vokany no hitanay). Loaka tanteraka ilay casque teo amin’ny guidon, ary ny bala notsimponiko eran’ny làlana dia boribory fotsifotsy toy ny kanety ny habeny. Ireny hopno ilay balle en caoutchou e! Fa nahaloaka casque moto an!
toy izao ireo bala nahavoa azy, rehefa mitefoka indray mandeha ny basy avy eny amin’ireo 4 X 4 dia bala maromaro amin’itony no mivoaka avy any:
Ireto kosa indray dia mba ambinambin-tsary mifameno amin’ireo tany aloha
Filed under: fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: Andry RAJOELINA, émeutes, démocratie, demokrasia, hetsi-bahoaka, mouvement populaire, riots, VIVA |	10 Comments »